May Wazdan Be With You! - Myanmar Sports
🎁 MAY WAZDAN BE WITH YOU! 🎁
💰 ဂိမ်းမျိုးစုံကို ကစားပြီး € 40,000 ( ယူရို ၄၀,၀၀၀ 💶 ) ဆုကြေးကြီးထဲက တစ်ခုကို ရယူလိုက်ပါ။ 💰
🕡 ပရိုမိုးရှင်းကာလ 🕡 ( 16. 05. 2022 – 31. 05. 2022 )
အချိန်ကာလကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၆ ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၂ နာရီ ၃၁ မိနစ် ( 16 May 2022 07:00 GMT ) ချိန်ကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၂ နာရီ ၂၉ မိနစ် ( 31 May 2022 07:00 GMT ) ချိန်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဆုကြေးများ ( may wazdan be with you prizes of 1xBet ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အလိုက် ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၃ € 1,000 ( ယူရို ၁,၀၀၀ )
၁၀ € 250 ( ယူရို ၂၅၀ )
၂၀ € 100 ( ယူရို ၁၀၀ )
၅၀ € 50 ( ယူရို ၅၀ )
၅၀၀ € 20 ( ယူရို ၂၀ )
၂၀၀၀ € 10 ( ယူရို ၁၀ )
Qualifying 1xBet “ may wazdan be with you 1xBet ” games: အနိုင်ရယူဖို့ ဆော့လို့ရနိုင်တဲ့ ဂိမ်းကတော့ –
Wazdan – ခေါင်းစဥ်အောက်မှာရှိတဲ့ ဂိမ်းတွေအားလုံးမှာ ဆော့လို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဂိမ်းတွင်းတူးလ် သတ်မှတ်ချက် – ဆုကြေးတွေကို ကျဘန်း ကံစမ်းမဲနှိုက် ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသမားတွေက ဆုကြေးတွေ ၁ ခုထက်ပိုပြီး ကံထူးနိုင်ပါတယ်။
၄။ အခု ကမ်းလှမ်းချက် ( 1xBet promotion ) မှာ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၇။ အခု ပရိုမိုးရှင်း ( wazdan ) တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကမ်းလှမ်းချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
၈။ ဒီပရိုမိုးရှင်း ( 1xbet wazdan offer ) အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
၁၂။ ပြိုင်ပွဲ၏ စည်းမျဉ်းများ ( terms of Wazdan ) ကို ပြောင်းလဲရန်၊ ပြိုင်ပွဲကို အချိန်မရွေး ဆိုင်းငံ့ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
အရင်ပုံမှန်ရနေကျ ဘောနပ်စ်တွေတုန်းကလို မဟုတ်ပဲ ဆုကြေးတွေကို ထုတ်ယူဖို့ ဘယ်လောင်းကစားမှ ကစားပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ ချက်ချင်း ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပရိုမိုးရှင်းပြိုင်ပွဲလေး ( Wazdan Tournament ) က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာမို့လို့ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ပြီး ဆုကြေးတွေကို ရယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။